Iimaski → Izambatho ezisebenzayo • I-P & M yobuchwephesha yobuchwephesha
Iimaski ezikhuselayo inokunceda kakhulu ukuthintela ukwanda kwezifo ezithile ezosulelayo kwinkqubo yokuphefumla. Bazi isihlangu esihle kwinkqubo yethu yokuphefumla. Imaski enjalo, egubungela impumlo kunye nomlomo, ithintela ukufikelela kwezihlanganisi eziyingozi, kodwa ikwathintela nezandla ezingcolisekileyo ekuchukumiseni ubuso. Nangona kunjalo, ukunxiba imaski akuqinisekisi ukukhuselwa kusulelo.
Ukusetyenziswa kwemaski yokhuselo kufuneka kudityaniswe namanye amanyathelo okuthintela usuleleko.
Owona mthetho ubalulekileyo kukuthobela ucoceko lwezandla yaye Inkqubo yokuphefumlakunye nokuphepha ukunxibelelana kufutshane, kungcono ukugcina umgama okungenani omnye weemitha ukusuka kwabanye. Ngokusebenzisa le mithetho ilula embalwa sinceda kakhulu ukunqanda ukunxibelelana nentsholongwane.
Iimaski ezikhuselayo zahlulwe zaya:
Oku kuxhomekeka kwizinto ezibonisiweyo. Imaski njengenxalenye yengubo yomsebenzi inokuba yinxalenye yeempahla ezifanelekileyo zemihla ngemihla zomqeshwa. Ezona zinto zifunyanwa kakhulu kwiikhemesti zenziwe ii-nonwovens, usike ngqo kwaye kulula ukuyibeka, kodwa kufuneka ilahlwe emva kokusetyenziswa kokuqala.
Isikhuseli sokhuseleko uMqhaphu onqabileyo omnyama obotshwe okhoyo kwivenkile yethu ekwi-intanethi >>
Imaski yekotoni Zisebenza kakhulu kangangokuba kwanele ukuzicwangcisa kubushushu obuphezulu ukuze zikwazi ukuzisebenzisa kwakhona. Ukulungiselela le njongo, kwanele ukuhlamba ngama-60 degrees, unokuwasusa iintsholongwane ngokutshiza ngamandla aphezulu okanye ngokubilisa emanzini abilayo. Kwakhona, ukubulala iintsholongwane imaski ngamalungiselelo enziwe kancinci anokuba yi-70% yotywala kuya kusebenza. Siphalaze nje imaski ngewelo kwaye ulinde ukuba ome.
Ngaphandle kwembono ebanzi malunga nokungasebenzi kokukhusela imaski, kufanelekile ukujonga ingqalelo yokuba nangona imaski engafezekanga inokudala idyasi yokuzikhusela, ngokuthelekiswa neziphumo zomgama ocetyiswayo weemitha ezi-2 kunxibelelwano oludibeneyo.
Unxiba njani imaski yobuso xa kufuneka iiyure ezininzi?
Ngelishwa, kuninzi lwethu, ukunxiba iimaski kuyinto exineneyo, ngakumbi iiyure ezininzi ngosuku. Unokuziva ungaphefumli okanye unxilile ngenxa yeoksijini encinci.
Ukuphelisa ukungahambi kakuhle okubangelwa kukunxiba imaski rhoqo, kufuneka ukhumbule nje imithetho elula. Okokuqala, nxiba imaski kuphela xa kukho imfuneko. Ukuba asinxibelelani nabantu bangaphandle kwaye asikho kwiindawo zikawonke-wonke, kufanelekile ukuba siyikhuphele, nokuba yeyimizuzwana okanye imizuzu. Ikhefu elifutshane liya kukuvumela ukuba uphumle kunye ne-oxygenate.
Kukwafanelekile ukufumana iimaski ezimbalwa ezinokuphinda zisebenze. Ngokwezibalo, umntu omnye uthenga iimaski ezi-8-10 (kwaye uzithenga xa zigqityiwe), ukuze batshintshe emini bazivase- kuthelekiswa nendlela esenza ngayo ngeempahla zangaphantsi. Ukuba kufuneka sikwindawo evaliweyo, kuya kufuneka ukuba uvule ifestile kwaye uphefumle ngokunzulu. Siza kuwubona umohluko kwindlela oziva ngayo amaxesha ngamaxesha kunye nokuphindaphinda.
I-Streetwear blue mask ekhuselayo yomlomo kunye nempumlo efumaneka kwivenkile yethu ekwi-intanethi >>
Inokusinceda njani imaski kubomi bemihla ngemihla?
Imaski yenzelwe ukukhusela inkqubo yethu yokuphefumla. Ngaphandle kokonyuka kwayo ukuthandwa ngenxa yobhubhane, kufanelekile ukuba siqwalasele ezinye iimeko ukusebenzisa kwayo kuya kusinceda ukukhusela impilo yethu.
Kwiinyanga ezininzi besisoloko sifumana ulwazi malunga nolu lukhona ngoku kumajelo eendaba ingxelo smogukusuka apho ungabona khona ukunyuka okuthile kokungcola ngexesha lokushisa. Ukukhula koxinzelelo lwayo kuyingozi kakhulu kwii-agglomerations ezinkulu ezinamandla okuhamba kwezothutho kunye nezityalo zamashishini.
Ngale nto engqondweni, abahlali bezona zixeko zikhulu emhlabeni basebenzisa iimaski zobuso ixesha elide. Emva koko, ngexesha lentwasahlobo nehlobo, sivezwa iintlobo ngeentlobo zokutshiza, apho kusetyenziswa amayeza okubulala izitshabalalisi okanye ichiza lokukhusela isifo seengcongconi, imikhaza nezinye izinambuzane. Kwakhona, xa ucoca ekhaya, ngakumbi ukucoca ngokubanzi kusetyenziswa izicoci ezomeleleyo, kufuneka sisebenzise imask ukukhusela umgudu wethu wokuphefumla ukuze kungangeni umphunga oyingozi.
Imaski yobuso baseAsiaIimpawu zeBielendaI-Bielenda busoiimaski ebusweniiimaski ezintle zobusoiimaski ezintle zobuso ezivela eRossmanniimaski zasekhayaiimaski zobuso zasekhayaimaski eyenziwe ekhaya yamabalaiimaski zobuso zasekhayaukwenziwa kweemaski ebusweniImaski yentloko emnyamaiimaski zeenwele zasekhayaimaski yobuso basekhaya ngemibimbiUnyango ekhaya lweemaski zobusoiinyani ze-hebeHebe buso bemaskiindlela yokwenza i-slime ngaphandle kweglue kunye nemaskiyintoni imaski yobuso oyicebisayoImaski yobuso baseJapanIimaski zaseKoreaImaski yobuso yaseKoreaIvenkile yemaski yaseKoreaI-lomi lomi facialkugqibaanti-smog iimaskiiimaski zokuhlinzwaiimaski zamadodaimaski yobusoimaski yobuso Allegroi-avon imaski yobusoagafia babushka imaski yobusoladybug buso busoI-Bielenda busoimaski yobuso yamadodaiimaski zobuso basekhayaiimaski zobuso zasekhayaUHebe ebusweni bemaskiukucoca ubuso bemaskiuphononongo lweemaski zobusoubume bemaski yobusorossmann ubuso iimaskiI-Sephora imaski yobusoimaski yobuso bephephaimaski yobuso kwi-sachetsIivisa ebusweni bemaskiziaja busoizilwanyana zobusoiimaski zeenweleiimaski zasekhayaiimaski zobuso basekhayaiimaski ezilahlayoIimaski zaseKoreaimaski yobuso be-lorealiimaski zonyangoimaske emqoloimaski yobusoiimaski zobuso ezenziwe ekhayaimaski yentloko emnyamaiimaski zeenweleUkunyibilikisa iimaskiUkunyibilikisa imaski yobusointo eyenziwe yasekhaya inyibilike imaski ebusweniiimaskhi ezikhuselayoukucoca iimaskiiimaski zokucoca ebusweniukondla iimaski zobusokhupha imasksiimaski zamehloI-rossmann masksI-masks yeprojekthi ye-selfieiimaski zeshitiiimaski zeshiti amaqhekeza angama-50iseti yemaskiukukhupha imaski yobusoimaski yobuso bamadodaUbuso be-misshaezona maski ezilungileyoezona zinto zibalulekileyo zobusoiimaski zendaloiimaski zobuso bendaloiimaski zobuso bendaloUkunyibilikisa imaski yobusoiimpahla zentengisoibrashi yokufaka imaskiiimaski zobuso ezicetyiswayoiimaski zobuso bobuchwepheshazokupheka iimaski zobuso ezenziwe ekhayaI-rossmann yobuso bemaskiI-rossmann yobuso bemaskiImaski yobuso baseRussiaubuso be-sephorasephora ebusweni bemaskiulusu79 iimaskiiimaski eziphantsi kunye nezihle zobusoiimaski zobuso ezingabizi